Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Bariire
Wararka ka imaanaya deegaanka Bariire ee jiinka wabiga shabeelle ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay wehliyaan kuwa Midowga Africa iyo ciidamo aan badenyn oo ajanabi ah inay saakay weerar ku qaadeen deegaankaa lana wareegeen.
Ciidamada Huwanta ah ayaa qabsaday deegaankan oo 14 km dhinaca koonfureed ka xiga degamada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Intii uu dagaalka socday, 7 qof oo rayid ah ayaa dhimatay markii ay miino la qaraxday gaari caasi ah oo ay ku qaxayeen duleedka Bariire.
Bariire oo ah Tuulo yar oo ay degenyihiin dad beeraley ah ayaa waxaa ay sanadihii ugu dambeeyay saldhig weyn u aheyd Maleeshiyada ururka al-Shabab, oo halkaasi ku lahaa laba maxkamadood oo ay dacwadaha ku qaadaan.
Waxaa maleshiyadu ay dhowr jeer dhinaca Bariire ka soo weerartay degamada Afgooye.
Bishii May ee sanadkan ayaa waxaa Bariire lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka, ka dib weerar ay ku qaadeen iyagoo wehliya ciidamada Somalia dhismo ay ku sugnaayeen saraakiil al-shabab ka tirsan.
Ma aha markii ugu horeysay ee ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ay ka qabsadaan al-Shabab deegaanada ay kaga suganyihiin gobolka Shabeelaha Hoose, dhowr jeer ayey deegaanno ay ka mid yihin Janaale iyo Awdhiigle ka qabsadeen al-shabab ka dibna ay isaga soo baxeen.
Dhageys wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Bariire